Impact Radius: Partner, Affiliate, Media uye Tag Management | Martech Zone
Mhedzisiro Radius inogonesa zvigadzirwa zvemadhijitari uye vamiririri kuti vawedzere iyo kudzoka kwekushambadzira shandisa pamatanho edhijitari, nharembozha uye asiri pamhepo. SaaS yavo yekushambadzira tekinoroji inogonesa vashambadziri kuve neyakafanana analytics tarisa mune ese ekushambadzira ekuedza nekutora granular yevatengi rwendo rwendo uye kushambadzira mutengo.
Iyo Impact Radius Suite yeMiti inosanganisira
Partner Manager - gadzirisa yako yakabatana uye zvine hungwaru zvirongwa zvewako. Deredza mashandisiro ako emitero uye wedzera ROI uchinge uchinge uchinge uchikwirisa, ongororo dzekunzwisisa, uye kutonga.
Tag Manager - tag tag pamatanho ese - kusanganisira nhare.
Media Manager - nzvimbo yepakati yedata yekujekesa yakawanda-chiteshi kuzivisa uye kuwana nzwisiso nezve kukosha kwakapihwa nechero sosi, uye nekuyera nenzira kwayo dzoka pane kushambadzira shandisa (ROAS).
Mobile App Tracker - Sanganisa imwe SDK uye nyatso kuteedzera ese mafoni ekuisa uye mukati-app zviitiko kubva kune vese vadyidzani.
Inbound Call Tracker - Teedzera zvese zviripo zvekufona chiitiko senge kungodzvanya, papuratifomu imwe. Shandura mafashama ebasa, kusanganisira contracting yemumwe wako uye kubhadhara.
MarketPlace - tsvaga uye ubatanidze vaparidzi nevanobatana navo kuburikidza neImpact Radius 'yekutsvaga algorithm.
Kuburikidza neotomatiki enzira dzekutengesa dzakakomba uye chaiyo-nguva kuendesa kwemaonero ekuzivisa ekuona, Mhedzisiro Radius inotyaira mari kumakambani epasirese senge American Airlines, Cabela's, Shutterstock, Tommy Hilfiger uye Wayfair.
Tags: affiliate manejimendiyakabatana kushambadzira chikuvayakabatana chikuvaagency kushambadzira chikuvaagency chikuvachiteshi kushambadzirakukanganisa nharaundainbound kufona trackermidhiya manejanharembozha app trackermaneja manejimendishamwari manejadzoka pane kushambadzira shandisaroassaastag managementtag maneja
Sep 20, 2016 na11: 40 PM
Usavimba iyi yakabatana yekushambadzira chikuva. Ndakaendesa muridzi webhusaiti kuti atenge chirongwa muMaxCDN uye ini ndakawana komisheni inobhadharwa mumwedzi mitatu. Ini ndakapedza mafomu ese anodiwa neMaxCDN's yakabatana yekushambadzira chikuva Impact Radius mwedzi mitatu mubhadharo usati wakwana. Ndakagadzirira mari yandaizowana kuti ndibhadhare mabhiri angu. Mushure memwedzi mitatu kana mubhadharo uchifanira kuitwa, timu yavo yezvemari yakasimudza nyaya yekuti nhamba yangu yekufambisa haina kushanda. Nei iyi nyaya yekufambisa nzira isina kugadziriswa mwedzi mitatu yadarika uko kunonoka kubhadhara kwaigona kuve kwakadzivirirwa? Nei ndakasimudza nyaya iyoyo ini pandinotarisira kuti mari yandawana kubhadhara zvikwereti zvangu zvakaipa? Izvi zviri pachena hurema / kuregeredza muchikamu cheImpact Radius system. Ini ndaive nemavhiki maviri kukakavadzana nevatsigiri vavo, ndakavakurudzira kuti vashandise nzira dzakasiyana dzinozivikanwa kuti dzave kushandira account yangu uye zvakazosvika pandakazobata misoro yeImpact Radius uye handina kumbowana mhinduro kubva kwavari. Ini ndakaitawo contact yakananga kunaMaxCDN nemusoro wavo kukumbira rubatsiro rwavo sezvo ini ndanga ndatopedza zvese zvandinogona kuita neImpact Radius, ini ndanga ndarasa kuvimba navo kwavari uye kubata navo zvinongondipa kushushikana. Handina kumbobvira ndawana rubatsiro kubva kuMaxCDN. Nekuedza kwese uku, ndakangorasa nguva ndokundipa kunetseka kwakanyanya. Uye ndakarasa mari nekuda kwezvirango zvekunonoka kubhadhara mabhiri. Kukanganisa kwangu ndaivimba navo kuti vachabhadhara.
Sep 20, 2016 na11: 44 PM
Zvinotaridza sekunge vangangoshandisa cheki chechokwadi mukuita kwavo, asi ini handina chokwadi chekuti ndichaenda kure sekutaura kuti havana kuvimbika pawakapinda irwo ruzivo rwekufambisa. Takashanda navo uye hatina kuona nyaya imwe chete.